Ibhulogi ka-Alexis Ravelo ›Juan Herranz
Izincwadi zami ezinconyiwe zika-Alexis Ravelo. Ukubuyekezwa okubalulekile kokuhamba phambili kwalo mbhali. Iziphakamiso zokujabulela imisebenzi yakho ethakazelisa kakhulu.
Amagama Abolekiwe, ngu-Alexis Ravelo
Ukubhala inoveli yobugebengu i-la Alexis Ravelo yenza okuthile okuyinkimbinkimbi noma okujulile. Akukhona mayelana nokuthola umbulali noma ukujabulela ukugula okungajwayelekile kobugebengu. Hhayi okungenani njengengqikithi eyodwa. Kuyikhono lokulandisa eliqhathaniswa nalelo u-Víctor del Arbol ohlale ezibophezela ...
Umfana onesikhwama ekhanda, ngu-Alexis Ravelo
Kuzo zonke izinhlobo kunamafemu aleli qembu lokuhluka, lokuphunyuka kuma-pigeonholes ngokuhle noma ngokubi. Endabeni ka-Alexis Ravelo, lolu daba lunobungozi ngokuphelele futhi ngokungangabazeki luhlala lusebenza kangcono. Izincwadi zabamnyama nezobugebengu zihlala zidinga abantu abazinikele njengoRavelo ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zika-Alexis Ravelo
Umbhali ovelele waseCanarian u-Alexis Ravelo uhamba phakathi kwamarejista okulandisa ahluke kakhulu. Yize ukunconywa kwakhe okucacile kweza kuye ngohlobo olumnyama lapho asevele eqamba khona uhlu olubanzi lwezincwadi. Isebenza kahle ngokuthinta leyo noir efafazwe nezincazelo zayo zokugxekwa kwezenhlalo noma ngisho nemingcele ...